Soo-saaraha iyo Warshadda daaqadda silsiladda daaqadda laba-track ee ugu wanaagsan Dijing
Taxane daaqad ah oo laba gees leh
Daaqadda laba-taagga ah ee saqafka leh waxay leedahay faa'iidooyinka fududaanta, quruxda, ballaarinta daaqadda weyn, beerta ballaaran ee aragtida, heerka iftiinka maalinta, nadiifinta galaaska ku habboon, adeegsiga dabacsan, badbaadada iyo isku halaynta, waxayna ku qalabeysan tahay awood sare, fudud oo awood leh, ka-hortag-xiirid, saamayn lid ku ah iyo dahab kale oo tayo sare leh Faashadda birtu waxay si dhab ah uga kooban tahay xatooyada ka-hortagga, ka-hortagga cayayaanka, hawo-qaadka, badbaadada, iwm.
Nolosha adeegga dheer, daaqadaha dhaadheer waxay leeyihiin faa'iidooyin ah in aan la qabsan meel bannaan oo gudaha ah, muuqaal qurux badan, qiimo dhaqaale, iyo hawo -qabad wanaagsan. Waxay qaadataa biraha birta ah ee birta birta ah ee birta ka samaysan, kuwaas oo si dabacsan loo furi karo iyada oo xoogaa la riixayo, iyada oo si toos ah loo dareerayo. Xarkaha daaqaddu waxay leedahay xaalad walaac oo wanaagsan oo aan si fudud loo dhaawicin. Qufullada qalabka xoogga sare leh ee lagu qalabeeyay taageerayaasha furitaanka iyo daaqadaha shaashadda lagama furi karo dibedda kadib marka la xiro, sidaas darteedna waxay u ciyaaraan saameyn liddi ku ah xatooyada.
1. Qurux badan oo fudud. Daaqadda simbiriirixan ayaa gebi ahaanba la qarin karaa, iyo muuqaalka ka baxsan daaqadda waa mid aan caqabad lahayn. Naqshadeynta biraha midigta iyo bidixda midig waa mid fudud oo xarrago leh.
2. Tayada badeecaddu waa sare. Kala -goysyada dhammaan qaybaha waa siman yihiin oo siman yihiin. Dabacsanaan in la isticmaalo, badbaado leh oo la isku haleyn karo, cimri dheer oo adeeg, ku furan diyaarad, meel yar qabsata, si sahlan loo rakibi karo shaashadaha, iwm. Habka furitaanka ee lagu dul simbiriirixdo biraha isbarbar socda ma laha khilaaf iyo saamayn aad u badan waana waxyeello yar. Daaweynta shaabadaynta adag, biyo -qabatinka wanaagsan iyo ciriiriga hawada, ma fududa in la daadiyo.
3. Khibrad wanaagsan oo adeegsade. Jihada xasiloon ee deggan, ku dhawaad ​​sanqadh la'aan. Waxay qaadataa biraha dhalada ee heerkoodu sarreeyo, oo si dabacsan loo furi karo iyadoo la riixayo iftiin. Iyada oo dhalooyin waaweyn oo quraarad ah, kaliya ma kordhiso nalalka gudaha, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa muuqaalka guud ee dhismaha. Xarkaha daaqaddu waxay leedahay xaalad walaac oo wanaagsan oo aan si fudud loo dhaawicin.
4. Gurigu waa ammaan waana la isku haleyn karaa. Daaqadda siibaysa uma taagna bannaanka sida daaqadda daaqadda. Marka la eego sifooyinka jirka, qaab -dhismeedku waa mid deggan oo ammaan ah, muraayadduna ma jabin doonto dabaylo xooggan. Wuxuu ku furmaa oo ku xirmaa isla diyaaraddii, sidaa darteed carruurta jecel inay ku ciyaaraan guriga ma aha inay ka walwalaan kuuskuusyada, daaqadaha dhaadheerina ma qaataan meel bannaan oo qolka ah.
Hore: Diamond mesh taxane daaqad shaashadda
Xiga: Taxanaha Daaqada Casement
La xiriira SOO SAARKA
Daaqadda Daaqadda Daaqadda Taxanaha-Laabidda Si Buuxda U Furmay
Taxanaha qolka qorraxda-cad oo hufan
Diamond mesh taxane daaqad shaashadda